प्लिज सहकारीलाई फाइनान्स नभन्नुस् ! (हेर्नुस् फाइनान्स र सहकारीका फरक पक्षहरु) – Banking Khabar
सहकारी के हो ?
सह–कार्य अर्थात सहकारीताले आपसमा मिलेर काम गरौं भन्ने भावना जगाउँछ । ’एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भइ व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समून्नतिको लागि गरिने एकतबाद्ध प्रयास नै सहकारी हो । समाजशास्त्रीको नजरमा सहकारिता सामाजिक उत्पिडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने साधन हो भने प्राविधिक रुपमा यसलाई एउटा व्याबसायिक कौशलको रुपमा लिइएको छ । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक असमानतालाई हर्टाई आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकिन्छ । थोपा थोपा मिलेर समुन्द्र बन्छ भनेझैं सहकारीको माध्यमबाट समान उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुको संगठित समूह गठन गरी थोरै(थोरै बचत संकलन बाट बृहत कोष खडा गरी समूह भित्रकै सदस्यहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने साना ठूला गर्जो र्टार्न सहकारी राम्रो माध्यम बनेको छ । यसै तथ्यलाई आत्मसाथ गरी नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तिन खम्बे नीति अर्न्तर्गत सहकारीलाई प्रमूख एक खम्बा मानी यसको महत्वलाई पुष्टि गरेको छ ।
सहकारी संस्थाहहरुको नियमन
सहकारी संस्थाहरुको नियमन सहकारी विभागबाट हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समय भने ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने कुराहरु उठिरहेको छ । यद्यपि, हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । विशेषतः ग्रामीण भेगका मानिसहरुलाई समुहमा आवद्ध गराएर रकम संकलित गरी आवश्यक पर्दा सहुलियतमा ऋण लिन सकिने गरी सहकारी संस्थाहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् । गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ हरेक गाउँमा सहकारीहरुको स्थापना गरी बैंकहरु नपुगेको स्थानमा पनि व्यवस्थित रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न यस्ता सहकारी संस्थाहरु सहयोगी बनिरहेका छन् ।
सहकारीभन्दा फरक छ फाइनान्स कम्पनी
फाइनान्स कम्पनीहरु सहकारी संस्थाहरुभन्दा बिल्कुलै फरक वित्तीय संस्थाहरु हुन् । राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरु फाइनान्स कम्पनी हुन् ।